Home Child Care သားသားမီးမီးလေးတို့ ညဘက်တစ်ယောက်တည်းအိပ်တတ်အောင် သင်ကြားပေးနိုင်တဲ့နည်းလမ်းများ
သားသားမီးမီးလေးတွေ ငယ်သေးတဲ့အချိန်မှာ ဖေဖေ၊ မေမေတို့နဲ့အတူအိပ်တာက ပြဿနာမရှိပေမယ့် အရွယ်လေးနည်းနည်းရောက်လာရင်တော့ တစ်ယောက်တည်းအိပ်တတ်အောင် သင်ကြားပေးဖို့ လိုအပ်လာပါပြီ။ ဒါပေမယ့် တော်တော်များများကလေးတွေက တစ်ယောက်တည်းအိပ်ရမှာကို ကြောက်တတ်ပြီး အသက် (၃) နှစ်နဲ့အထက် သားသားမီးမီးအများစုမှာ ညအမှေောင်ကြောက်တတ်တဲ့ဝေဒနာကို ခံစားရလေ့ရှိပြီး အချို့ကလေးတွေဆို တော်တော်လေးအရွယ်ရောက်တဲ့အထိ ညအမှောင်ကိုကြောက်တတ်ကြတုန်းပါ။ ဒီတော့ သူတို့လေးတွေကို တစ်ယောက်တည်းအိပ်ခိုင်းဖို့ ခက်ခဲပြီပေါ့။ ဒါပေမယ့် နည်းလမ်းလေးတွေရှိပါတယ်။ ဘာတွေဖြစ်မလဲ အတူတူကြည့်လိုက်ရအောင် ချစ်မေမေတို့ရေ ….
ညဘက်ကိုပုံမှန်အိပ်ချိန်တစ်ခုသတ်မှတ်ထားပြီး အဲ့ဒီအချိန်အတိုင်း သားသားမီးမီးတို့ကို အိပ်ရာဝင်ခိုင်းပါ။ အိပ်ချိန်နဲ့အိပ်ရာထချိန်မှန်တာက သားသားမီးမီးလေးတို့ကို စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာအရပိုမိုလုံခြုံစေပြီး တစ်ယောက်တည်း အိပ်ရသည့်တိုင် အလွယ်တကူနဲ့အိပ်ပျော်နိုင်မှာပါ။
၂။ မီးရောင်များကို သေချာချိန်ညှိပါ။
ညနေခင်းအချိန်ကိုရောက်ပြီဆိုရင် သားသားမီးမီးတို့ရဲ့အိပ်ခန်းထဲမှာ မီးမှိန်မှိန်လေးပဲထွန်းပေးထားပါ။ မီးရောင်က မမှိန်သည့်တိုင် အလွန်အမင်းထွန်းလင်းနေတာမျိုးမဖြစ်သင့်ပါဘူး။ ဒီလိုမျိုးအလင်းရောင်ကို စနစ်တကျထားပေးတာကလည်း သားသားမီးမီးတို့ရဲ့အိပ်ချင်စိတ်ကို လှုံ့ဆော်ပေးနိုင်ပြီး အိပ်ချိန်ရောက်လို့သိပ်တဲ့အခါမှာ ပိုမိုလွယ်ကူစေပါလိမ့်မယ်။
အိပ်ရာပေါ်မှာ အရုပ်တွေအများကြီးတင်ထားပေးတာကြောင့် သားသားမီးမီးတို့က အဲ့ဒီအရုပ်တွေနဲ့ဆော့ကစားဖို့ပဲ အာရုံရပြီး အိပ်ချိန်ကိုအနှောင့်အယှက်ဖြစ်စေပါလိမ့်မယ်။ ထားမယ်ဆိုရင်တောင် သူတို့အကြိုက်ဆုံးဖက်ခေါင်းအုံးလေးနဲ့ အကြိုက်ဆုံးအရုပ်တစ်ခုလောက်ကိုပဲ ကုတင်ပေါ်တင်ထားပါ။ အဲ့ဒါက သားသားမီးမီးတို့ လွယ်လွယ်ကူကူနဲ့အိပ်ပျော်စေပါလိမ့်မယ်။
၄။ အိပ်ရာဝင်ခါနီးအချိန်မှာ ကလေးကိုမခြိမ်းခြောက်ပါနဲ့။
တစ်ယောက်တည်းမအိပ်ရင် ဘာဖြစ်မယ်တို့၊ အခုမအိပ်ရင် ညာဖြစ်မယ်တို့ဆိုပြီး ခြိမ်းခြောက်တာက သူတို့လေးတွေကို အိပ်ပျော်စေဖို့ထက် ကြောက်စိတ်ကိုသာ ပိုမိုကြီးထွားစေပါတယ်။ ချစ်မေမေတို့ရဲ့ သားသားမီးမီးလေးတွေကို အိပ်စက်ခြင်းက ပျော်စရာကောင်းပြီး ကျန်းမာရေးကို အထောက်အကူဖြစ်စေတဲ့အကြောင်း ရှင်းပြရင်း ပျော်ရွှင်တဲ့အိပ်စက်ခြင်းဖြစ်အောင် ဖန်တီးပေးသင့်ပါတယ်။
၅။ လွဲမှားသောအပြုအမူများ မပြုလုပ်ပါနဲ့။
အိပ်ရာမဝင်ခင်မှာ ချောကလက်ကျွေးတာ၊ အချိုရည်တိုက်တာ၊ တီဗီကြည့်ခိုင်းတာ၊ ဂိမ်းဆော့ခိုင်းတာတွေက ပုံမှန်အတိုင်းအိပ်စက်အနားယူနိုင်ဖို့ အခက်အခဲဖြစ်စေပါတယ်။ သားသားမီးမီးတို့အနေနဲ့ အိပ်ရာမဝင်ခင် အနည်းဆုံး (၁) နာရီလောက်အလိုတည်းက သဘာဝအတိုင်းအပန်းဖြေအနားယူနိုင်အောင် ချစ်မေမေတို့က စီစဥ်ပေးထားရမှာပါ။
သားသားမီးမီးတို့က နို့စို့နေတုန်းဆိုရင် ချစ်မေမေတို့က သူတို့လေးတွေကို အိပ်ရာပေါ်မှာပဲ နို့တိုက်ပါ။ သူတို့လေးတွေက အဲ့ဒီလိုနဲ့အိပ်ပျော်သွားနိုင်သလို အိပ်မပျော်သေးရင်လည်း သူတို့အိပ်ပျော်သွားတဲ့အထိ ကုတင်ပေါ်မှာ အတူတကွ အိပ်ချင်ယောင်ဆောင်ပေးပါ။ သူတို့အိပ်ပျော်သွားတဲ့အချိန်မှာတော့ ကိုယ့်အခန်းကိုယ်ပြန်အိပ်နိုင်ပါတယ်။
သားသားမီးမီးတို့အနေနဲ့ သူတို့ဘာသူတို့ တစ်ယောက်တည်းအိပ်တာ ဘယ်နှညရှိလာပြီဆိုရင် ဘယ်လိုမျိုးဆုပေးမလဲဆိုတဲ့စနစ်ကို ကျင့်သုံးပေးပါ။ ဒီအချက်က သားသားမီးမီးလေးတို့အတွက် အခြားသောနေရာတွေမှာပါ အသုံးဝင်တဲ့အလေ့အကျင့်ကောင်းတစ်ခုဖြစ်ပြီး ဒီလိုပုံစံနဲ့သွားရင်း ညဘက်တစ်ယောက်တည်းအိပ်ရတာကို သူတို့လေးတွေ ကြောက်ကြတော့မှာမဟုတ်ပါဘူးလို့ ချစ်မေမေတို့အတွက် အကြံဥာဏ်ကောင်းလေးတွေကို မျှဝေပေးလိုက်ရပါတယ်။
Previous articleကလေးငယ်တွေမှာ တွေ့ရလေ့ရှိတဲ့ အကျင့်ဆိုးလေးတွေကို ဘယ်လိုကာကွယ်တားဆီးမလဲ?
ဘေဘီလေးတွေကို နားပေါက်ဖောက်ပေးခြင်းနှင့် ပတ်သတ်ပြီး သိထားသင့်တဲ့ အရေးကြီးသော အချက်များ
Nandar Lwin - October 15, 2020 0